Amerikanina vita vaksiny feno no nilazana fa hisaron-tava tarehy ao anaty
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana US » Amerikanina vita vaksiny feno no nilazana fa hisaron-tava tarehy ao anaty
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny CDC dia mangataka amin'ny Amerikanina vita vaksiny tanteraka mba hisaron-tava ao anaty trano
Ny torolàlana masking dia azo ampiharina amin'ny faritra sasany izay misy ny Covid-19, na amin'ny olona sasany.
Ny tranga vaovao isan'andro an'ny COVID-19 dia efa ho avo efatra heny tany Etazonia hatramin'ny volana Jona.
Ny karazana Delta azo afindra amin'ny coronavirus izay mamindra hatramin'ny vaksiny aza.
Ny fanapahan-kevitry ny CDC dia efa niasa nandritra ny andro maromaro.
Roa volana lasa izay, ny Ivotoerana amerikana misahana ny fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) nanadio ny Amerikanina vita vaksiny tanteraka hiverina any amin'ny faritra anatiny toy ny trano fisakafoanana, teatra, fivarotana ary toerana iasana tsy misy sarontava. Ankehitriny, vonona ny hihemotra ilay masoivoho ary hanome toro-hevitra amin'ny olona vita vaksiny feno indray mba hisaron-tava amin'ny toerana anaty sasany.
Ny fanapaha-kevitra, noraisina tao anatin'ny fiakaran'ny raharaha COVID-19, dia hampivadika ny fitarihan'ny fikambanana teo aloha, rehefa nambara.
Miaraka amin'ny fihenan'ny Delta azo tsidihina kokoa amin'ny coronavirus izay mamely na dia ny vaksiny aza, ary amin'ny tranga miakatra any amin'ny faritra ambany tahan'ny tsindrona, ny CDC dia antenaina hangataka amin'ireo olona vita vaksiny sy tsy vita vaksiny mba hisaron-tava rehefa misakafo ao an-trano na miditra amin'ny toerana be olona.
Ny torolalan'ny CDC dia azo inoana fa hambara amin'ny talata tolakandro, fa ny teny mazava ao aminy dia mbola tsy mazava. Ny torolàlana masking dia azo ampiharina amin'ny faritra sasany izay misy ny Covid-19, na amin'ny olona sasany. Araka ny tatitra sasany, mitanisa loharanom-baovao avy ao amin'ny White House, fa ireo izay mipetraka amin'ny zaza tsy vita vaksiny na olona tsy manam-pinoana dia angatahina hisaron-tava amin'ny toerana malalaka ho an'ny daholobe.
Ny fanapahan-kevitra dia efa niasa nandritra ny andro maromaro. Ny mpanolotsaina momba ny fahasalamana ao amin'ny White House Dr. Anthony Fauci dia nilaza tamin'ny Alahady fa ny torolàlana toy izany dia "nodinihina mavitrika" avy amin'ny CDC tamin'izany fotoana izany.
Tranga isan'andro isan'andro an'ny COVID-19 dia efa ho avo efatra heny tany Etazonia hatramin'ny volana Jona, raha ny angom-baovao avy amin'ny CDC. Miaraka amin'ny ankamaroan'ny tranga voalaza fa tsy voamarina, ny tompon'andraikitra amin'ny fanjakana sy ny mpaneho hevitra amin'ny haino aman-jery dia nanameloka an'ireo izay tsy nety nikorontana.
"Ity dia olana iray mazàna eo amin'ireo tsy voavolavola, ary izany no antony mahatonga antsika any ivelany, miangavy ny olona tsy vita vaksiny mba hivoaka hanao vaksiny," hoy i Fauci tamin'ny Alahady, ary nilaza fa mihetsika i Etazonia amin'izao fotoana izao "ao amin'ny lalan-diso ”mikasika ny famongorana ny COVID-19.
Raha ny voalazan'ny CDC dia 69 isan-jaton'ny olon-dehibe amerikana no nahazo vaksiny vaksiny coronavirus farafaharatsiny. Na eo aza izany, amin'ireo izay mbola tsy nahazo ny fitifirany dia naneho ny fandatsaham-bato vaovao fa ny ankamaroan'ny olona dia tsy mikasa ny hanao izany.